Afrika Archive - Gool FM - page 4	twitter
Xidiggii hore ee Masar Mohamed Aboutrika oo lagu daray Liiska Argagixisada
(Cairo), 18 Jan 2017 –Laacibkii hore ee xulka Qaranka Masar, Mohamed Aboutrika oo shacbiyad ballaaran ku leh gudaha waddankiisa ayaa lagu daray Liiska argagixisada Masar sida ay shaacisay xukuumadda dalka.
Garyaqaanka Aboutrika ayaa sheegay in xidiggii hore Al Ahly oo haatan 38 jir ah ay dowladda Masar uga shakisan tahay in uu xiriir la leeyahay Ururka laga mamnuucay dalkaasi ee Akhwaanul Muslimiin isla markaana dhaqaale ku taageeray.
Aboutrika oo 7 jeer Horyaalka Masar la qaaday Al Ahly, 5 jeerna ku guuleystay Koobka 
Essam El Hadary oo noqday xiddigii ugu da’da waynaa ee ciyaara koobka qaramada Afrika
(Port-Gentil) 18 Janaayo 2017 – Goolhayaha xulka qaranka Masar ee Essam El Hadary ayaa xalay noqday ciyaaryahankii ugu da’da waynaa ee ciyaara koobka qaramada Afrika taariikhda.
Shabaq ilaaliyaha xulka Egypt ayaa xalay saftay isagoo jira 44 sano iyo 2 maalmood kulankii koobka qarammada Afrika ee Qeybta (D) oo ay la yeesheen xulka Mali.
Kulanka dhexmaray xulalka Egypt iyo Mali ayaa xalay ku dhammaaday barbaro goolal la’aan 0-0, waxaana goolhaye Essam El Hadary uu sidaas ku noqday xiddigii ugu da’da waynaa ee saftay 
(Libreville) 15 Janaayo 2017 – Xulka qaranka Senegal ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee guul ka soo hooya koobka qarammada Afrika ee 2017, kaddib markii guul ka gaaray xulka Tunisia kulan ka tirsan Qeybta (B) ee koobkan.
Senegal ayaa 2-0 ku garaacay Tunisia, iyadoo Sadio Mane uu kaalin ka qaatay guushaan uu gaaray xulkiisa.
Labada gool ee uu xulka Senegal ku adkaaday kulankan waxa ay la yimaadeen qeybtii hore waxaana goolka hore u dhaliyey 10’daqiiqo Sadio Mane, halka goolka kale uu raacsaday 
Algeria ayaa hoggaanka ciyaarta 
13 naadi oo EPL ka dhisan ayaa laacibiin uga maqan yihiin Koobka Qaramada Afrika (Waa kuwee waase imisa kooxdiiba?)
(Libreville) 15 Jan 2017 – Waxaa shalay oodda laga rogey Koobka Qaramada Afrika dufcaddiisa 2017 oo sanadkan markale lagu qabanayo dalka yar ee saliidda leh ee Gabon.
Yeelkeede, waxaan koobkan ku farxi doonin kooxo badan oo reer Yurub iyo meelo kalaba ka dhisan oo laacibiin muhim ah ku waynaya tartanka laba-sanadlaha ah.
Tusaale ahaan dhanka EPL ilaa 13 kooxood ayaa laacibiin ku waayaya tartankan, iyadoo kooxaha ugu darani ay yihiin Stoke, Sunderland iyo Leicester oo min 3 ay kaga maqan yihiin.
HOR DHAC: Tunisia Vs. Senegal
(Libreville) 15 Jan 2017. Dalka 2004tii qaaday koobka qaramada qaarada Africa, Tunisia waxa ay la dheeli doontaa Senagal oo ah kooxda kala sarreynta xulalka Africa ugu korreysa, waana kulanka ugu adage e tartanka ilaa iyo hada.
Tunisia waa markii 12-aad oo xiriir ah oo ay ka soo qeyb galeyso balse tirade guud ee ay ciyaartay waa 18 jeer.
Hayeshee, kama aysan soo gudbin wareega sided dhamaadka tan iyo 2004 oo ay martigaliyeen deedna ku guuleysteen.
Tunisia:Up (4-4-2) Mathlouthi: Youssef, Dhaouadi, Maaloul, Nagguez: 
AFCON 2017: Xulalka Burkina Faso iyo Cameroon oo barbaro ku kala baxay
(Libreville) 14 Janaayo 2017 – Xulalka Burkina Faso iyo Cameroon ayaa barbaro ku kala baxay kulan ka tirsan Qeybta (A) ee Koobka Qarammada Afrika 2017 oo maanta daaha laga qaaday.
Kulankan waxaa goolka ku horreeyey xulka Cameroon, waxaana 35’daqiiqo u dhaliyey Benjamin Moukandjo, sidaas ayaana lagu kala nastay 1-0 looga gacan sarreeyey xulka Burkina Faso.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay xulka Burkina Faso ayaa la yimid goolka barbaraha, waxaana u dhaliyey 75’daqiiqo Issoufou Dayo, kulankan ayaana ku 
(Libreville) 14 Janaayo 2017 – Koobkii 31-aad ee Qaramada Afrika ayaa caawa ka furmay dalka Gabon, iyadoo lagu daah furay dalka martigelinaya koobka ee Gabon iyo xulka ku cusub koobka ee Guinea-Bissau.
Kulankii lagu daah rogay koobka Qaramada Afrika ee 2017 ayaa labada xul ee Gabon iyo Guinea-Bissau waxa ay ku kala tageen barbaro 1-1.
Qeybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro 0-0.
Marti geliyeyaasha koobkan ee Gabon ayaa goolka la horreeyey waxaana u dhaliyey 52’daqiiqo Pierre-Emerick Aubameyang.
Goolka uu dhaliyey wiilka 
HOR DHAC: Gabon vs Guinea Bissau
(Libreville) 14 Jan 2016. Waxaa caawa dalka Gabon lagu daah furi doonaa koonka qaramada qaarada Africa 2017.
Kulanka ugu horreeya waxaa dheeli doona Gabon oo tartanka marti-galineysa iyo Guinea Bissau.
Guinea Bissau waa markii ugu horreeysay ee ay ka soo qeyb gasho tartanka African Cup of Nations.
Gabon: Ovono – Biyogho Poko, Appidangoye, Ecuele Manga, Obiang – Tandjigora, Ndong – Lemina, Madinda, Evouna – Aubameyang.
Guinea Bissau: Mendes – Agostinho, Emmanuel, Juary, Rudinilson – Soares, Bocundji, Idrissa, Piqueti, Zezinho – Federic.